EDITORIAL:TACLIIN U-RAADINTA ARDADA SOOMAALIYEED
from Dubai,30th July 2001.
Tan iyo markii horraantii bishan lagu dhawaaqay natiijada Imtixaanaadka Dugsiyada Sare ee dalka Imaaraadka Carabta oo ardada Soomaaliyeed ay aad uga soo dhalaaleen dowrkooda, dadaalkii ay muujiyeenna laga qiray Imaaraadka gudihiisa,markii ay Idaacadaha iyo Jaraa'idkaba qoreen in kaalinta labaad ee natiijada Imtixaankaas dhanka cilmiga ah ay gashay gabadh Soomaaliyeed oo keentay buundo dhan 99.7%, looguna abaalguday durbadiiba waxbarasho Jaamacadeed oo lacag la'aan ah iyo abaalgud lacageed, ayaa waxaa si caadadu tahay soo waajahdo waalidiinta ku dhaqan Imaaraadka dadaal ay ugu raadinayaan caruurtooda waxbarasho sare .
Hawshaas iyada ah waa hawl aan fududeyn waayo Jaamacadaha ka furan Imaaraadka waa lacag , dakhliga waalidiinta Soomaaliyeed ee ka xoogsada Imaaraadkana ma aha mid sidaas u weyn oo awood u siinaya inay tacliin sare kaga bixiyaan caruurtooda .
Waxaa taa u dheer oo xusid mudan maciishada dalka oo ah mid aad u kulul, iyadoo qiimaha adeegyada guud ee Dawladda ay meelaha qaarkood toban jibaarmeen oo mucaamaladaha iqaamadaha iyo hawlaha kale ee dadku u baahan yahay ay noqdeen kuwa aan la goyn karin,welwelna abuura marka loo baahdo. Waxaa waalidiinta taa uga sii darran iyadoo aan loo ogoleyn in loo cusbooneysiiyo Iqaamadda ilmahooda marka ay gaaraan da'da 18 sano sida sharciga Iqaamadda qabo ,waqtigaas oo ardeyda ay badanaaba ka baxayaan Dugsiyada Sare , oo markaana ay soo waajaheyso waalidka marxalad adag oo la xiriirta sidii uu ugu heli lahaa ilmahiisa tacliin sare iyo Iqaamad.
Hadaba iyadoo ay jiraan arrimahaas aan soo sheegnay ee culus ee haysta waalidiinta ayaa hadana u baahan in la is-barbar dhigo dadaalkaa dheeraadka ah ee ay ardada Soomaaliyeed ka muujiyaan waxbarshadooda, iyagoo inta badan ka hela imtixaanada buundooyin sar-sare oo aan la maleeyn karin , una baahan tashjiicin iyo geesinimo gelin , si ay tacliintooda sare u dhameystaan.
Waxaa hadaba jira oo naga soo gaaray magaalada Dubai in Madaxweynaha Dawladda KMG ah Cabdiqassim Salad Xasan markii uu bartamihii bishan Luuliyo booqday dalkaas inuu ku soo qaaday madaxdii uu la kulmay oo uu ugu horreeyo Madaxweynaha Imaaraadka Sheikh Zaayid Bin Suldaan Ala-Nahyan in la siiyo tixgelin gaar ah oo dhanka tacliinta sare ah ardada Soomaaliyeed ee ku gudubtay Imtixaanka buundooyin sare .
Wuxuu kaloo carabaabay Mudane Cabdi-qassim markuu Jaaliyadda kula hadlaayay Dubai in dhanka shaqo-qoristana lagu tixgelin doono mustaqbalka dhow Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Imaaraadka.
Waxay kaloo Wararka naga soo gaaraya Imaaraadka sheegayaan in durbadiiba laga bilaabay Xaruunta Safaaradda Soomaalida ee Abu Dhabi olole lagu diiwaan gelinayo ardada ku gudubtay buundooyinka sar-sare .
Inkastoo aan la wada hagab tiri karin baahida waxbarasho ee ardadaas, oo qaar badan oo ka mid ahna ay ku gudbeen buundooyin iska dhexdhexaad ah, hadana tallaabadan waa mid wanaagsan oo dhabaha u fureysa jiilalka soo socda, hadii lagu guuleysto !!!!